सिटामोलमा सीमित जनस्वास्थ्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै होइन । नेतृत्व तहका अधिकांशका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन ।
असार २३, २०७५ सचिन घिमिरे
काठमाडौँ — नेपाल त्यस्तो देशको रूपमा परिणत भएको छ, जहाँ जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि एक अर्थोपेडिक सर्जन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर चरणबद्ध अनशन गर्न बाध्य छन् । तर जनस्वास्थ्यकै नाममा सरकारी लालकिताबबाट तलब बुझ्नेहरू भने डाक्टर केसीको अनशनको सम्बन्धमा केही देख्न, सुन्न र बोल्न नपरोस् जस्तो गरेर प्रत्येकपटक मौन रहन्छन् ।
आफ्नो एजेन्डा लागू गर्नुपर्दा राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनु पनि जायज हुने र तर सोही ‘क्रान्तिकारी’ सत्तामा पुगेपछि ‘यो देशको स्वास्थ्य व्यवस्थामा ध्यान देऊ’ भनेर आमनागरिक शान्तिपूर्ण अनशन बस्दा पनि अलोकतान्त्रिक र नाजायज हुने ! गृहमन्त्रीले थापाले भनेजस्तै प्रत्येक मुद्दाको उठान, छलफल र कार्यान्वयन गर्ने थलो संसदमात्र होइन ।
जनता केही बोल्न सक्दैन, त्यसकारण जनताको पेटबोली सधैं राज्यले बोलिदिनुपर्छ भन्ने उग्र मानसिकता यस्तो किसिमको भनाइबाट उजागर हुन्छ । फलस्वरुप, राज्यलाई टालटुले नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर ‘महान अग्रगामी छलाङ’ मारेको न्यारेटिभ स्थापना गर्न सहज हुन्छ ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमानमा आँखा चिम्लिएर लागू गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण नगरिकन स्वास्थ्य विमाले मात्र जनस्वास्थ्यको समस्या निराकरण गर्न खोज्नु सरकारले फालेको अर्को एउटा पपुलिष्ट कार्यक्रम हो, जसको भ्रम केही वर्षमा नै उजागर हुनेछ । दुवै हात र खुट्टा निजीकरण र माफियाकरणको दहमा चुर्लुम्म डुबे पनि टाउको मात्र माथितिर फर्काएर समाजवादको नारा भट्टाइरहेको वर्तमान सरकारको जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने कुनै पनि ठोस दृष्टिकोण र कार्ययोजना छैन ।
यदि हुँदो हो त चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विपरीत अनेक किसिमका स्वार्थ समूहहरूको हितार्थ रातारात निर्णयहरू बदल्ने काम हुने थिएन । एकातिर डाक्टर केसी चिकित्सा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्न बाध्य छन्, अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यको मामलामा वर्तमान सरकारको अगाडि अनगिन्ती कार्यभारहरू छन्, जसलाई राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिरहेको छ ।
जनस्वास्थ्यको परिभाषालाई शारीरिक, मानसिक र जीवनयापनको फराकिलो आयामसँग जोड्दै स्वास्थ्य सूचकांकहरूको गुणात्मक विकास गर्न अल्माआटा घोषणापत्रको अवधारणा लागू भएको चार दशक पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थाको संरचनागत ढाँचा अनुसार पिरामिड शैलीको स्वास्थ्य व्यवस्था भएमात्र आम जनताको पहुँच सहज हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मको स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवलोकन गर्दा स्रोत, सेवा, गुणस्तर, जनशक्ति र प्रशासनिक दक्षताको सवालमा उल्टो पिरामिड राखेजस्तै सुक्दै–सुक्दै गएको मात्र भेटिन्छ । स्रोतहरूको केन्द्रीकरण, वैज्ञानिक प्रविधिहरूको केन्द्रीकृत उपयोग र सहरमुखी स्वास्थ्य शिक्षाका कारण दुर्गम भेगका धेरै जनता स्वास्थ्यसेवाबाट बञ्चित छन् ।
आम जनताको प्रथम सम्पर्कविन्दु अत्यन्त कमजोर भएपछि स्वास्थ्यसेवामा पहुँचका लागि घरभन्दा लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक भार अनावश्यक वृद्धि हुन्छ ।
जनस्वास्थ्यको सूचकांकहरूको गुणात्मक वृद्धि गर्नु, आम नागरिकको स्वास्थ्यसेवाका लागि खर्च हुने रकमको न्यूनीकरण गर्नु र उपचारका सिलसिलामा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामी तथा कुरुवाहरूको रहनसहन व्यवस्थाजस्ता गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा सहयोग पुर्‍याउनु स्वास्थ्य व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुन् ।
यद्यपि उल्लेखित तिनै पाटाहरूमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त झिनो उपलव्धिहरूमै रुमल्लिरहेको छ । धरातलीय रूपमा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यन्त कुपोषित भएकोले यसले अन्ततोगत्वा गुणस्तरीयताको बहानामा नाफामुखी संस्थाहरूकै मुख ताक्न बाध्य बनाएको छ ।
नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनताले भरपर्दो प्राथमिक स्वास्थ्य नपाइरहेको स्थितिमा जब रोग बल्भिँmदै जान्छ, अधिकांश निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई आर्थिक क्षमता, बसोबास गर्ने स्थान र स्वास्थ्य संस्थासँगको भौतिक दूरी ठूलो चुनौती हुनपुग्छ । यस अवस्थामा कैयौं बिरामी अस्पताल जान ऋण लिनेदेखि, गाईभैंसी, गरगहना अथवा घरजग्गा समेत बेचेर अस्पताल पुग्न बाध्य हुन्छन् ।
यस अवस्थामा राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोर उत्पादकत्वको कारण कैयौं मानिस सापेक्षबाट निरपेक्ष गरिबीतिर धकेलिरहेका हुन्छन् । फलस्वस्प, उपचारजन्य ऋणहरू बढ्दै जाने, उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्ने जस्ता अवस्थाहरूको सिर्जना हुन्छ ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूका लागि उपलव्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकीय सेवाहरूको अलावा गैरचिकित्सकीय सेवाहरू पनि स्वास्थ्य व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । गैरचिकित्सकीय सेवा भन्नाले अस्पताल पुगेपछि बिरामी तथा कुरुवाहरूलाई सहज तरिकाले उपलव्ध हुनुपर्ने खाना खाने स्थान, तातो तथा चिसोपानी व्यवस्था, सहज शौचालय, अस्पताल पुगेपछि लामो पर्खाइमा नबसिकन चिकित्सकसँग भेट पाउन सक्ने अवस्था, आराम गर्ने ठाउँहरू र बिरामी कुर्दा आरामसँग रात बिताउने स्थानको व्यवस्थाहरू पर्छन् ।
साथै बिरामी जुनसुकै सामाजिक पृष्ठभूमिको भए पनि उसले पाउनुपर्ने नैसर्गिक सम्मान, बिरामीलाई लागेको रोगबारे स्वास्थ्यकर्मीले कदर गरिदिनुपर्ने गोपनियताको सवाल, आफ्नो रोग तथा जाँचबारे सम्पूर्ण रेकर्डहरूको सही अभिलेख र आफूलाई चाहेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिने सल्लाह तथा परामर्श पनि स्वास्थ्य व्यवस्थासँग राखिने गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू हुन् ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलव्ध गराउनु भनेको बिरामीको समग्र स्थितिको हेरविचार गरेर अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर उन्मुख हुन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूको सवालमा केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक पर्खंदा टेलिभिजनको व्यवस्था र कतै सुत्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भने गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा प्रशस्त चासो देखाएको पाइँदैन । अस्पताल हातामा सहुलियत दरको चमेना गृह नहुँदा बाहिरको होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा निर्भर हुनुपर्ने कारणले बिरामी खर्चभार बढिरहेको हुन्छ ।
अस्पताल हातामा तातो र चिसोपानी समेत नभेटिएर वरपरका रेष्टुरेन्ट तथा चिया पसलहरूमा धाइरहन बिरामीका कुरुवाहरू बाध्य हुन्छन् । धेरै अस्पतालमा सहज सञ्चार सुविधा, फलफूल तथा अन्य सामग्री किन्न पसल र बिरामी तथा कुरुवाका लागि चमेना गृहको व्यवस्था हुँदैन । स्वस्थ हुनु भन्नाले मानसिक र शारीरिक दुवै रूपले स्वस्थ हुनु भएकोले स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक सुविधाहरू उपलव्ध नगराउँदा कुरुवा र बिरामी दुवैले झेल्ने मानसिक तनावबीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ ।
अक्सर आफ्नै आफन्तहरू अस्पतालमा बिरामी कुर्न बस्ने र कुरुवाहरूको अलपत्र स्थिति देखेर बिरामीको समेत मानसिक तनाव बढ्छ । तसर्थ बिरामीको मानसिक स्वास्थ्यको हितार्थ पनि गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा बिरामी कुर्न बसेका आफन्तहरू बिरामी पर्ने र फेरि बिरामी सञ्चो भएर आफ्नो कुरुवालाई कुर्नुपरेका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।
बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धी विश्व सञ्जालको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, विकसित राष्ट्रहरूमा भन्दा कम विकसित राष्ट्रहरूमा बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट हुनसक्ने जोखिमको खतरा बीसौं गुना बढी देखिएको छ । साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अस्वस्थ वातावरणबाट हुने संक्रमणबाट विश्वभरमा झन्डै चौध लाख मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । यस्ता संक्रमणका कारकतत्त्वमा चिकित्सकीय लापरबाहीका अलावा गैरचिकित्सकीय पक्षहरू जस्तै– सुत्ने ठाउँ, सफा खानेपानी तथा शौचालयहरूसमेत पर्छन् ।
एकातिर आफूले खर्च गरेको रकम अनुसार चित्तबुझ्दो स्वास्थ्यसेवा नपाइरहेको अवस्था, अर्कोतिर स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पूरा गर्न नसकेको साधारण गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूले बिरामी तथा कुरुवाहरूको मानसिक तनाव बढिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सानोभन्दा सानो गल्तीमात्रै हुँदा पनि विवाद चुलिने र कैयौं दिनदेखिको सम्पूर्ण आक्रोश चिकित्सकीय लापरबाहीमा जोडिन पुग्छ । अनि साना गल्तीहरूमा पनि अस्पताल, बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका बीचमा चिसो सम्बन्ध बन्न पुग्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य केन्द्रहरूको वातावरण शान्त बनाउनका लागि चिकित्सकीय मात्र होइन, गैरचिकित्सकीय पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्धि गर्नु, स्वास्थ्यजन्य खर्च न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु र स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका बिरामी तथा कुरुवाको गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरू पूरा गर्नु स्वास्थ्य व्यवस्थाका उद्देश्यहरू हुन् ।
उपचारजन्य खर्चको अनावश्यक वृद्घिले बिरामी भइसकेपछि पनि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्रमण गर्ने चलन निरुत्साहित गर्छ । फलस्वरुप, आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांक वृद्घि गर्नका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थाले अहम् भूमिका खेल्न सक्दैन । नेपालमा एकातर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था भनेकै प्रत्येक बिरामीको मुखमा सिटामोल हाल्नु हो भन्ने जीव–चिकित्सकीय ठाडो बुझाइबाट राज्यका कार्यक्रम तथा नीतिहरू सञ्चालित छन् । अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सिटामोल पनि स्थानीय निकायसम्म पुग्न नसकिरहेको अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण स्थिति देखिन्छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा होइन ।
नेपालको घनाढ्य तथा नेतृत्व तहका अधिकांश मानिसका लागि राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग केही लिनुदिनु छैन । कुलिन तथा धनाढ्यहरू, पार्टीका नेताहरू र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको दिल्ली, सिंगापुर र थाइल्यान्डका अस्पतालहरूमा सहज पहुँच भइरहेसम्म आम जनताले कुन तहको स्वास्थ्य व्यवस्थासँग सम्झौता गर्नुपरेको छ, त्यसको पीडा राज्य हाँकिरहेको नेतृत्व पंक्तिलाई पटक्कै छैन र हुँदैन पनि । तसर्थ जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले बहन गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वहरूको सम्बोधन विना समाजवादको सपना एउटा फगत नारामा मात्र सीमित रहनेछ, जसको जनआकांक्षासँग गोरु बेचेको साइनो पनि बन्ने छैन । स्वास्थ्य व्यवस्थाको अत्यन्त दयनीय स्थिति रहिरहेसम्म राज्यले आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर कागजी उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्नु कुनै तुक रहँदैन।
प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:५५
असार २३, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — तपाईंका बालबालिका मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर वा अन्य माध्यमले अनलाइन वा अफलाइन गेम (खेल) मा रमाइरहेका हुन्छन् कि ? स्कुलबाट आउनासाथ उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो काम गेम खेल्नु नै हुन्छ ? तपाईंले सम्झाउँदा समेत लुकेर खेलिरहेका हुन्छन् ?
यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक छ भने, तपाईंले निकै सचेत हुने बेला भइसकेको छ । तपाईंका बालबालिका भिडियो गेमको अम्मलमा फसिसकेका हुन्छन् । यसै साता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले रोगको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण (आईसीडी) मा डिजिटल र भिडियो गेमको अम्मललाई मनोविकार (एडिक्टिभ बिहेभियरल डिजअर्डर) का रूपमा परिभाषित
हाल अन्य मुलुकझैं हाम्रो देशमा समेत बालबालिकाका लागि साथीभाइ, खेलमैदान, पार्क, बालकथा आदि सबैजसो इन्टरनेटको एउटा एप्लिकेसनमा समेटिएको छ । बालबालिका घरबाहिर वा घरभित्र खेलिने खेलको मजा लिनुभन्दा इन्टरनेट गेममा औधि रमाउन थालेको अवस्था तपाईं–हाम्रो घरभित्र सहजै देखिन थालेको छ ।
‘हाल हाम्रो मुलुकमा समेत बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू बढी संख्यामा वास्तविक नभई यथार्थभाषी (भर्चुअल) डिजिटल विश्वमा बढी व्यस्त हुन थालेका छन्,’ कान्ति बाल अस्पतालका बाल मनोचिकित्सक डा. अरुणराज कुँवर भन्छन्, ‘फाट्टफुट्ट रूपमा अनलाइन वा अफलाइन गेम, इन्टरनेट, इलेक्ट्रोनिक मिडियाका अम्मल भएका बालबालिकाका आफन्त सल्लाह लिन आउन थालेका छन् ।’
इन्टरनेट गेमको अम्मलले मानसिक–शारीरिक रूपमा बिमार गर्नुका साथै बच्चाहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि समेत एउटा ठूलो खतराको रूपमा देखिन थालिएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्रा.डा. सरोज ओझा आंैल्याउँछन्, ‘हेर्नोस्, अन्तरक्रियात्मक मिडिया अत्यधिक उत्तेजक हुन्छन् ।’
डा. कुँवरका अनुसार, हरेक क्षण बदलिँदो रूपमा, विभिन्न रोमाञ्चकतासँगै विभिन्न संगीत, विभिन्न थिमको संयोजनमा रोमाञ्चक इन्टरनेट गेमले बालबालिकाको मनमस्तिष्कमा कब्जा जमाउन थालेको छ ।
अनलाइन गेम एकै पटक समूहमा धेरै व्यक्तिसमेत खेल्ने भएकाले जित्ने होडमा बालबालिका घण्टौं बिताउन थाल्छन् । उनीहरू थाहा नै नभईकन गेमको अम्मलमा फस्छन् ।
अनलाइन गेम खेल्ने सबै बालबालिका गेमको अम्मलमा परेका हुँदैनन् । तर यो गेम खेल्ने सोख कतिखेर अम्मलमा परिणत हुन्छ, यो थाहा नै हुँदैन । यसैले अभिभावकले उनीहरूको क्रियाकलाप नजिकबाट नियालिराख्नुपर्ने डा. कुँवर आैंल्याउँछन् ।
आफ्ना बालबालिकालाई काउन्सेलिङ गरेर, सम्झाएर यसको नकारात्मकताबारे बुझाउँदै मायाले अम्मल लाग्न दिनबाट बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ । तर अम्मलजस्तै स्थितिको अनुभव भए चिकित्सकीय सहयोग लिन सकिने डा. कुँवर बताउँछन् ।
अम्मल कसरी थाहा पाउने ?
गेमको अम्मलमा बालबालिका परेका छन् भने कुरा तपाईं सहजै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंका बालबालिकाले तीन–चार घण्टाभन्दा बढी नै इलेक्ट्रोनिक मिडिया चलाउन थाले भने यो खतराको घण्टी हो । तपाईंले तुरुन्त उनीहरूका लागि एउटा निश्चित समय तय गर्नुपर्छ ।
अम्मलमा परेका बालबालिका बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म जतिखेर पायो त्यतिखेर गेम खेल्दा उनीहरूसँग अन्य कामका लागि समय नै हुँदैन । ‘यदि गेमले गर्दा उनीहरूको खानपान, पढाइ, साथीभाइसँग खेलकुद, स्कुल जानुलगायत दिनचर्या प्रभावित हुन थाल्यो भने यसलाई अम्मलको रूपमा लिन सकिन्छ,’ डा. कुँवर भन्छन्, ‘उनीहरूले स्कुल र पढाइबाट बच्ने प्रयास गर्नु पनि खतराको घण्टी हो ।’
पहिलेको दाँजोमा यदि बालबालिकाको दैनिक रुटिनमा व्यापक परिवर्तन देखिन थाल्नु खतराको घण्टी हो । उनीहरूको खानपान, निद्रासमेत प्रभावित हुन थाल्छ ।
अम्मलमा पर्न थालेका बालबालिका सामाजिक जीवनबाट दूरी बनाएर एक्लै रहन रुचाउन थाल्छन् । उनीहरूमा आक्रामकता, चिढिने बानीलगायत व्यवहारमा समेत परिवर्तन देखिन थाल्छ । गेम खेल्नमा रोक लगाउने प्रयास गर्दा बालबालिकाहरू हिंस्रकसमेत हुन सक्छन् ।
तपाईंका बालबालिका गेमको अम्मलमा परेको भान भए बाल मनोचिकित्सकको सल्लाह लिन सकिन्छ । काउन्सेलिङलगायत माध्यमबाट यसको उपचार हुन्छ ।
कान्ति बाल अस्पतालमा सरकारी बिदाको दिनबाहेक सधैं ‘चाइल्ड एन्ड एडोलसेन्ट साइकियाट्रिक क्लिनिक’ सञ्चालन हुने गरेको छ ।
यो मुलुुकको एक्लो यस प्रकारको क्लिनिक रहेको जनाउँदै डा. कुँवर यहाँसमेत गेमलगायत अम्मलको उपचार हुने बताउँछन् ।
जसरी स्वस्थ व्यक्तिले सातामा एक दिन तरल आहार वा सलाद आदिमा निर्भर रहेर शरीरको विषाक्तता हटाउँछन्, त्यसरी नै डिजिटल विश्वबाट टाढिएर डिजिटल डिटक्स गरिन्छ ।
रक्सी, चुरोट आदिको अम्मल लागेजस्तै गरी जुनसुकै उमेरका व्यक्तिमा ‘भर्चुअल वल्र्ड’ मा रहने बानी अम्मलकै रूपमा विकसित हुन्छ । पछि उनीहरू चाहेर पनि यो बानीबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । डिजिटल डिटक्सको अर्थ आफूलाई डिजिटल विश्वबाट अलग राख्नु हो ।
यसका लागि आफूलाई केही घण्टा, दिन वा महिनासम्म स्मार्ट फोन, इन्टरनेटबाट टाढा राखेर एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्न डा. ओझा सल्लाह दिन्छन् । ‘डिजिटल डिटक्सिफिकेसनले इच्छा भएर पनि रोक्न सक्ने बानीको विकास हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इच्छा भए पनि कुनै खास व्यवहारबाट आफूलाई रोक्न सक्ने व्यक्ति कहिल्यै कुनै अम्मलमा फस्न सक्दैन ।’
कसरी छुट्छ ?
-इन्टरनेटमा गेम खेल्ने बालबालिकाको समय अभिभावकले तय गर्नुपर्छ ।
-उनीहरू इन्टरनेटमा कुन गेम खेलिरहेका छन्, यसको चियो गर्नुपर्छ ।
-इन्टरनेटमा थोरै समय देऊ भनेर मायापूर्वक सम्झाउनुपर्छ ।
-मोबाइल गेम वा डिजिटल वल्र्डमा एक दिनमा एक घण्टाभन्दा बढी समय बिताउन दिनु हुँदैन ।
-बिदाको दिन यो समय दुई घण्टासम्म बढाउन सकिन्छ ।
-बालबालिका अलमलिऊन् भनेर मोबाइलमा गीत आदि देखाइरहने गर्नु हुन्न ।
-उनीहरूलाई इन्टरनेटको उपयोग पढाइ र ज्ञानवर्धक कामका लागि मात्र गर्न दिनुपर्छ ।
-घरबाहिर खेलिने खेलमा बढी समय दिन प्रेरित गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:४५